UMnyango Ubonge Omasipala Ngokungenelela Kolwezindlu – Sivubela intuthuko Newspaper
KUBUYE ithemba emiphakathini yasezindaweni ezakhele isifunda seLembe, enyakatho yesiFundazwe saKwaZulu-Natal, ngesikhathi uMnyango wezokuHlaliswa KwaBantu esifundazweni ubika ukuthi sekuseduze ukuba bathole izindlu zomxhaso.Ibamba leNhloko yalo Mnyango uMnuz Mduduzi Zungu, uthe ocwaningweni lwabo lwakamuva lo Mnyango ukwazile ukuhlonza nokuxazulula izihibe ezifaka phakathi ukushoda komhlaba wokwakha okuyizona ebeziyimbangela yokuthi uhlelo lukaHulumeni lokwakhela abantu izindlu lushaye ngonyawo lonwabu.
‘’Sifisa ukwazisa umphakathi ukuthi uhlelo lwezindlu luqhubeka kahle kubo bonke omasipala. Lokhu kusho ukuthi amalungu omphakathi asohlwini lwezindlu zomxhaso ngeke alinde isikhathi eside ngaphambi kokuba athole izindlu zawo,’’ kuchaza uZungu.
UZungu ubekhuluma egameni likaNgqongqoshe walo Mnyango, uMnuz Ravi Pillay, ngesikhathi kuqhubeka ingqungquthela ehlanganisa oMasipala abancane abane abakhele owesiFunda seLemebe, ebiKwaMaphumulo, lapho bekudingidwa khona izindaba ezithinta ukuhlaliswa kwabantu ezindlini zomxhaso, ekuqaleni kwenyanga kaJuni.
Ubonge ukubambisana okuhle okuphakathi koMnyango nomeya bale mikhandlu, okubalwa kubo owaKwaDukuza, owaKwaMaphumulo, owaseMandeni, waseNdwendwe kanye noMkhandlu wesifunda seLembe ngokungenelela odabeni lwezindlu njengoba umsebenzi wokuhlalisa abantu ezindlini zomxhaso usemahlombe kaHulumeni wesifundazwe.
Ngemuva kwengqungquthela laba baholi bavule ngokusemthethweni izindlu ezintsha ezedluliselwe kumalungu omphakathi waKwamaphumulo.
Phakathi kwababe nenhlanhla yokuba phezulu ohlwini lwamalungu omphakathi kube ngumndeni waKwaMthethwa. Lo mndeni uphethwe izingane njengoba abazali sebadlula emhlabeni . Ekhuluma egameni lo mndeni uNksz Thabile Mdletshe uBonge imizamo kaHulumeni wokungenelela kulesi simo sokungabi nayo indlu esesimweni esihle ebebebhekene naso bengumndeni.
‘’Sifisa ukubonga uhulumeni ngokusukumela izidingo zethu, kakhulukazi thina esingenawo amandla okuzakhela,’’ kubonga uNksz Mdletshe.
Kule ngqungquthela abaholi bemikhandlu nomnyango baphinde bavuselela isibopho sokusebenzisana ngenhloso yokuphuthumisa uhlelo lokuhambisa izidingo kubantu.
Ubuyisele emphakathini uSomabhizinisi